Hadalkii Madaxweyne Deni ma rajo gelin doonaa iskaashiga maamul Goboleedyada? | Raadreeb
Maamulkii hore ee Puntland oo xubin ka mid ahaa iskaashiga maamul goboleedyada ee horey xiriirka wadashaqeynta u jaray dowladda federaalka ayaa sidoo kale mas’uuliyiinta dowladda dhexe ka mamnuucay deegaannada maamulkaasi.
Go’aankaasi oo uu shaaciyay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo dowladda federaalka.
“Haddee horta dastuurka ayaa dhigaya in maamul goboleedyadu iskaashadaan wixii danahooda ka dhaxeeya, marka in la iskaashado ma aha wax dastuurka ka soo horjeeda. Fiiri, dowladnimadu waa waxa dadku ku heshiiyaan iyo dastuurka, wax walbo oo dastuurka na farayo waan ku dhaqmi doonaa,” ayuu yiri madaxweyne Deni.
“Wax walbo oo Puntland ay gaar u leedahay waan ilaalin doonaa, wax walbo oo dowladda Soomaaliyeed ay wadaagtana waan ka wada shaqeyn doonaa”.
“Marka ay timaado wax walbo oo Puntland u gaar ah iyo wada shaqeynta Garowe iyo Muqdisho, waxaad moodaa in uusan ka gorgortami doonin, li anna qaabka ay u soo bexeen iyo qaabka doorashooyinka lagu saleeyay markaad fiirisid, waxaa caddaaneysa in maamulka Garowe uu waxbadan ka horreeyo maamul goboleedyada kale,” ayuu yiri Bursaliid oo BBC-da la hadlay.
“Dowladdu iyo dadku shakhsiyaadka madaxda ah waa in la kala saara. Shakhsiyaad madax ah waa isqaban karaan, aragtiyaha shakhsi ah waa ku kala duwanaan karaa, laakiin dowladda Soomaaliya ee federaalka ah waa dowlad qur ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan in ay ka wada shaqeeyaan la rabo, horumarkeeda waa horumarka qof kastaa oo Soomaali ah, Putlandna ahmiyad weyn bey u leedahay inay dowlad federaal ah oo sal adag in ay dhisanto,” ayuu yiri madaxweynaha cusub ee Puntland.
“Marxaladdan, aniga dowlad wax la qeybsanaya ma arkin, wali dhismo dowladeed baa lagu jiraa. Dhismaha marka lagu jirana, aragti kala duwanaan dadka soomaaliyeed waa imaan kartaa. Anigu aragti kala duwanaanta jirta khilaaf uma arko. Khilaafaadka shakhsiga ah oo madaxda qaar ka dhici karta, taa anigu hadda dhexgeli maayo oo madaxdii iiga horreysay iyo madaxda dowladda federaalku madaxa hadda joogta, dowladdu dadka ma aha sideedaba.”
Dad badan oo aqoon u leh madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa rumeysan in Deni uu yahay nin ay ka go’antahay qaddiyadda federaalnimada. Maxamed Nuur Caalin, oo aqoon dheer u leh Siciid Cabdullaahi Deni, isla markaana horay ula soo shaqeeyay ayaa mar sii horreysay BBC-da u sheegay in xiriirka Puntland iyo kan dowladda dhexe ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan yeelan doonin weji fiican.
“Markaad eegtid madaxweyne Farmaajo iyo mas’uuliyiinta hadda maamulka haya, haddii la is barbar dhigo Siciid iyo Cabdiwali Gaas, waxaa maamulka Farmaajo aad ugu dhow Cabdiwali Gaas. Sababtoo ah Siciid waa nin aad u aaminsan qadiyadda federaaleynta, waa nin aad ula dhacsan hannaanka ay ku socdaan kooxda hadda mucaaradka ku ah dowladda dhexe, waa nin Farmaajo kula loollamay doorashadii madaxweynaha federaalka, wax soo dhaweyn ah kama uusan helin dowladda Farmaajo, marka waxaan filayaa in Siciid meeshii uu ka taagnaa khilaafka u dhexeeyay Federaalka iyo maamul goboleedyada uu meel kasii fog ka istaagi doono”, ayuu yiri Caalin.
“Dowladda Puntland markii la aasaasayay waxaa saldhig u ahaa in ay qeyb ka ahaato nidaam dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah, waxaan shacabka Puntland iyo madaxdii Puntland iyo odeyadii soo maray uga mahadnaqayaa doorka ay ka soo qaateen in dowlad soomaaliyeed la helo oo federaal ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta ka jirta sida ay dad badan ogyihiin Puntiland naf iyo maal iyo wakhti bey ku bixisay, ilaalinteedana iyada ayuu waajib ka saaran yahay,” ayuu yiri madaxweyne Deni.
“Annagu ma rabno in dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay wiiqanto ee in ay horumartaan rabnaa….horeyna uga shaqeyn jirnay haddana ka shaqeyn doonaa. Wixii khilaaf ah, marxaladda hadda lagu jiro waa marxalad dib u dhis dowladeed ah, dastuurku waa qabyo, shaqooyinku wali ma fariisan, dalku waxa uu ka soo baxay nidaam ‘centeral’ ah oo dowlad dhexe ay taliso, nidaamka federaalka wali shuruuc badan oo lagu hagi lahaa wax baa ka qabya ah. Marka arrimaha laga wada shaqeynayo waxaan dhihi lahaa khilaaf mahan ee kala aragti duwanaan u baahan in laga shaqeeyo weeye. Anigu waxaan ka shaqeynayaa geedi socodka dhismaha dowlad soomaaliyeed oo sal adag leh.”
“Laakiin inta yar ee aan ka naqaano waxaad moodaa inuu yahay nin caqli badan*, diblomaasi ah waxbadanna xeerin doona, qaabka Gaas uu u waday iyo Shariif Xasan iyo Axmad Madoobe iyo Xaaf waxaad moodaa in uu ka yara duwi doono, xataa laga yaabo inuu markaan dimuquraadi ahaan si uga weyn yahay oo uu u caqli celin doono oo la soo dabbaali doono xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyada xiriirkooda la sameeyo,” ayuu yiri Dr Bursaliid.
“Walow ay dastuuri tahay in maamul goboleedyada iskaashi ka wada shaqeeyaan wixii danahooda ee iyaga ka dhaxeeyo, haddaba waxaad moodaa in uu ayaga laftigoodu ugu baaqi doono in ay xukuumadda dhexe la shaqeeyaan, wixii khilaaf oo shakhsiyadeed ee meesha jirana laga bixin doono haddana laga wada xaali doono qaabka dastuurkuba uu qabo, in awoodihii maamul goboleedyada iyo xukuumadda dhexe lakala qeybiyo la iskuna xurmeeyo. Wixii walaaqashada ahaa ee xukuumaddu ay gobolladu ku haysayna ay meesha ka bixi doonaan, madax adeeggii maamul goboleedyada ee xukuumaddana uu meesha ka bixi doono.”